OpenSUSE 13.1 iri pano | Kubva kuLinux
OpenSUSE 13.1 iri pano
Nezuro, Mbudzi 19, mufananidzo wakagadzikana weshanduro 13.1 yekuparadzira yakaburitswa vhuraKuburitswa uku ishanduro miti yakasvibira, saka ichave iine yakawedzera kutsigira.
Nguva yepamutemo yekutsigirwa ichave kusvika Chivabvu 1, 2015 yeiyo yakajairwa vhezheni, uye kusvika munaNovember 1, 2016 yeYevergreen 13.1.
Iyi vhezheni inouya nekuwanda kugadzirisa uye maficha. Zvinoenderana neyakavhurikaSUSE timu, iyo otomatiki yekuyedza chishandiso openQA Yakave nekugadziriswa kwakawanda.
Izvo zvakafanana zvakaitika kune iyo faira system btrfs, iyo yatove kufungidzirwa kugadzikana kwekushandisa kwemazuva ese. Iyo inouya neyazvino vhezheni ye Havana, uye yakagadziridzwa Ruby 2.0 en Njanji 4.
GCC yakaiswa mushanduro 4.8, pamwe neiyo nyowani glibsc ine rutsigiro rwe C11 y C ++ 11. Chokushandisa yast yakatumirwa ku Ruby, uye iyo injini inopa injini iri MaharaType 2.5.
Nezve iyo yakajairika ruzivo rwevashandisi, iyo mifananidzo inotsigirwa VDPAU en TABLE; zvishandiso zve Android ichave nekuzara kwakazara mune iyo maneja faira, Shell uye mutambi Amarok.
Applied Experimental Technologies inosanganisira rutsigiro rwekutanga kubva Wayland game Weston en GNOME Shelland the PlasmaDesktop de KDE.
Ini ndicha dhawunirodha mufananidzo kuti ndiedze iyi vhezheni, uye ini ndichakurumidza kuita ongororo muLinux Iyo ISOs ye vhuraSUSE 13.1 anotorwa kubva pane inotevera chinongedzo:
Dhawunirodha kuvhuraSUSE 13.1
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » OpenSUSE 13.1 iri pano
Ini ndatoitora pasi nezuro ndiri kuiisa izvozvi kuti ndione !!!!!!!
Kumirira kuongorora ikoko 🙂
Uff ine godo, ini ndinongovimba kuti vanoiisa muMES repo
Ndakaiyedza mubeta, uye haina kunyatso bata ziso rangu.
Simba rekuvhurika rinoonekwa kana iwe uchirishandisa kazhinji uye iwe ukaona kuti iwe hautakure kana kuda, uye zvese zvine kubatana izvo vamwe vangade. kana isiri yekuvhura, ini handina zano rekuti imwe distro ingashandisei
Ini ndakatyora kanoverengeka xD, ekunze marekodhi akatonyanya kusatendeseka kupfuura iyo ubuntu ppa, iwe unobatanidzwa neyast uye inotanga kukumbira iwe kudzima zvinobatsira zvinhu.
Iwo pachawo akatsiga, asi ichokwadi kuti inyonganiso nezvakachengetedzwa… Ini pachangu sezvo ndiri muArch / Manjaro / Chakra, handisati ndafamba….
Pandakaishandisa yakave isina kugadzikana kana ndichishandisa iyo Tumbleweed repos, zvinova ndizvo zvandaida kuve neruzivo rwekuumburuka senge ma distros aunotaura, asi sezviri pachena neyakavhurikaSUSE zvirinani kushandisa iyo yakasvibira (yakaenzana neUbuntu LTS, senge iyi vhezheni).
Zvakanaka, zvakatoipa. Tarisa kuti ndaisa zvirongwa kuburikidza http://software.opensuse.org/packages/ uye ndanga ndichivandudza kubva 11.1 kusvika 12.3 uye pasina matambudziko, asi senguva dzose, munhu wese ane zvaanoona.
Uyezve, uine Open Open Service, zvinova nyore (mumakotesheni, ine curve yekudzidza, senge zvese zvimwe) kubata yako wega rpm (kana deb, chero chaunoda!) Mune yako repository. Ndinoiwana chishandiso chakanaka kwazvo.
Chero zvazvingaitika, zvekuchengetera zvekunze zvinogara zvisingavimbike, mushure mezvese zvinoitwa nemunhu / boka revanhu vanogona (kana vasingaite) vane zano rezvavari kuita, uye iyo system haina chekuita nazvo chero (iva PPA kana kuvhuraSUSE) ... kutaura zvazviri, ini ndinofunga iyo yakavhurikaSUSE sisitimu iri pamusoro, iwe tinya pachirongwa, inokuudza kuti ichawedzera repository, uye ipapo unayo .. Mune maonero angu, zvinongoda kuwedzerwa kune manejimendi eYast pane desktop, kuti urege kuvatsvaga chete kuburikidza newebhu.
haishande sosi sosi.list
Kwete, nekuti zvikasadaro zvingave zvakashata kana zvinovakirwa padhiri.
Asi kana iwe uchida kuona zororo uye sarudzo dzawo mune yakavhurikaSUSE, unogona kugara uchiita izvi:
Iko faira rakachengetwa kune yega repository, unogona kuita backup kana iwe uchida, katsi kune yega yega inoratidza kumisikidzwa kwayo, nezvimwe….
Chero kunyorera (semuenzaniso iyo Yast2 software maneja) yakavakirwa pa zypper inoshandisa aya mafaera kuwana ruzivo rwesaiti kubva uko kurodha pasi mapakeji.
Ini ndinofunga wazviita nemazvo, nekuti kunyangwe hazvo isingavimbike ekuchengetera ekunze, Yast inokuzivisa nguva dzese kana chimwe chinhu chingaputswa. Ini handizive zvawaedza kuisa kana kubva kupi kuti ndikubvunze kuti ubvise mapakeji anodiwa, asi zvirinani neakajairika enzvimbo dzekuchengetedza vanhu, ndinokuudza kuti hazviputse zvakadaro.
Zvakanaka, zvinotaridzika zvakanaka… .asi muLIVE mode handina kukwanisa kuita kuti iyo Wi-Fi ishande… kana neyakavakirwa-muWi-Fi yelaptop kana neiyo yekunze USB Wi-Fi kanyanga…
mamwe ese ma distros ... vanoziva zvese otomatiki ... ini HANDINA kukwanisa kuita openuse basa ... uye zvinoita sekunge iyi vhezheni ichaitika zvakafanana ...
imhosva yangu ..
Pindura kuna falangista33
Wakaedza kumisikidza kubva yast?
kuvhuraSUSE nekumisikidza inoshandisa ifup yekubatanidza, kubva yast iwe unogona kushandura iyo yekumisikidza kuti igadziriswe ne networkmanager
Ini ndinofunga iko kukanganisa kweRararama (ndinofunga zvaive pamwe neiyo KDE vhezheni, ini handizive kana zvikaitika neGnome), kana yakavhurwaSUSE yaiswa iwe unofanirwa kumisikidza waya kubatana kubva kune iyo pani icon (chimwe chinhu chiripo mune ese anoshanda masisitimu , Handifunge kuti zvinotora anopfuura 1 sec kuiwana) uye kutanga zvakare.
Chii chakakosha nezve BTRFS nezve ext4?
CoW, subvolume, snapshoot ye subvolume, data kuvimbika kutarisa.
Kupokana, chinhu chakanakisa nezve openSUSE ndizvo chaizvo zvinoita kuti ndigare kure neiyi distro: Yast2.
Handizive kuti sei, asi pese pandinoyedza ndinonzwa kuti pane chirikushaikwa .. kana kuti ndinochiona ichiremerwa, sekunge yaive nzou ..
Uye chenjera, ini ndoziva kuti iko kwakanaka kwazvo kugovera, asi ini handizive ... chimwe chinhu chine icho hachinyatso kundibata (kunze kwekuti ini handisi fan we rpm).
Ini handisi iyeye fan of .rpm futi. Ini ndinonyanya kufarira fan .deb, .pkg.tar.gz, .pkg.tar.xz uye .txz.
… Uye vazhinji vapepeti: p
Iko kusarudzika kweiyo rpm vs deb kwakafanana neuyo anofarira tsvuku kana bhuruu, haina hunyanzvi hwetekinoroji asi ine tsitsi, kana pamwe nhoroondo kana chero wevaya varipo akatambura rpmhell yakakurumbira munyama yavo, uye pakanga pasina hunhu mamaneja ekutsamira uye vanhu vakaisa fedora rpm muSUSE kunge vanopenga kubva pamapeji einternet kuti vaone kana vakakandwa (rpm bone, wakaipa sei iwe!), zvichikonzera njodzi.
Parizvino, hazvishande zvakaipisisa kana zvirinani, iwo akasiyana marongero emafaira akaumbwa mukati meimwe faira (ridaidze kuti deb kana rpm). Ivo vane misiyano, uye imwe ine mabhenefiti iyo imwe isina. Asi kana zvasvika pakuisa dep kana rpm, avo vanodambura tambo ndivo maneja maneja (apt-tora, yum, zypper…) vanozvibata. Uye kwandiri, zypper (iyo yandinoshandisa) haina chinhu chekugodora kuti ndiwane-kuwana, pamwe kumhanya mune dzeshanduro dzakapfuura, asi izvozvi, inoshanda chaizvo.
Mukuenzanisa pakati peaya maviri masystem, ini ndakaguta nevanhu vanokuudza kuti: 'Zvakanaka, rpm -f inosemesa uye zvakadaro inotonhorera sei apt-tora ...', uye ipapo watove ojiplático, sezvo vachivhiringidza maneja weDepency (apt-tora), pamwe nepakeji, zvinoita sekunge chero chinhu chinoenda kana zvasvika pakuparadza iyo rpm package, uye kazhinji yenguva yacho hazvina maturo.
Muchidimbu, kusarudza kushandisa imwe distro uye imwe yeiyo package / yekuchengetedza maneja yauri kushandisa parizvino inoita kwandiri sechinhu chisinganzwisisike kana chine hwaro hwetekinoroji, kunze kwekunge iine mashoma mashoma mapurogiramu mune yakasarudzwa package / repositories iyo inokutadzisa kushandisa zvirongwa iwe zvaunoda, izvo zvandiri kufunga kuti hazvisizvo ne openSUSE, iyo yakanyatso kudyiswa.
Uri kuita zvakanaka here? Iwe une zvirongwa zvaunoda here? Enderera mberi ...
Ndozvandinofunga. Ndezvekuti ini handinzwisise iyo yekusarudza imwe mhando yemapakeji kana imwe. Zvizere bvumirana newe.
Zvakanaka, ini handinzwisise chokwadi chekuve fan weiyo chaiyo mhando yepakeji, kana ivo vakaiswa nenzira imwecheteyo: S
Uye mune chero mamiriro ezvinhu, ini ndinowana muRPM chinhu chinonakidza kwazvo, iri Delta-RPM, iyo inoita kuti kugadzirisa kwemapakeji akasiyana kuve nyore.
Ini ndaida Yast, kunyangwe maererano nesarudzo dzekumisikidza ini ndinoiona iri yepamusoro kune iyo Windows 7 control panel.
Zvinotaridzika zvakanaka kwazvo kana zviriko kune yakawanda hype yeiyi vhezheni (kunyangwe ichitaridzikawo zvakanaka), zvakanaka kwazvo wongororo kwese kwese.
Chinhu choga chandinogona kutaura ndechekuti YaST inogona kuvandudza chimwe chinhu nenzira inonakidza (zvingave zvakanaka kana zvichitaridzika kunge zvakanaka seMageia / Mandriva / Mandrake control panel) asi chokwadi hachisi chinhu chakakosha chaizvo.
Ehe hongu, pane izvo zvauri .. Ndinovimba izvozvi kuti vhezheni iyi yaendeswa kuRuby (isati yave mumutauro usinganzwisisike), ndinovimba kuti ikozvino vanhu vazhinji vanogona kubatana nekukanda tambo sezvo ruby ​​iri mutauro wakakurumbira, wedzera mamamojuru, polisha iwo aripo, nezvimwe ...
Icho chimwe cheiyo distros yandakayedza pandakasarudza kuchinjira kuLinux. Uye kunyangwe ini ndazopedzisira ndagara padebian nekuti yaikodzera zvakanyanya kune zvandaitsvaga, ndinofanira kubvuma kuti openSuse ingangodaro iri yeimwe yakanakisa distros iripo (kana isiri iyo yakanyanya) uye yast mufaro 🙂
Ini ndinoda iyo Yakavhurika !!!, zvirokwazvo inovandudza….
Ndisati ndambofarira kuyedza distros hehehe ndakatanga kushandisa Kuvhura uye chokwadi ndechekuti idhiri rakakura, asi pakupedzisira ndakafarira iyo .deb zvakanyanya
Paunoti iwe unoda .deb zvirinani, iwe unoreva iyo package system kana distro yakatorwa kubva kuDebian? nekuti kana iri yekutanga, sekutaura kwandakaita pamusoro, ini handisi kuwana chero hwaro hwehunyanzvi hwayo.
Zvakafanana nechinamato chechitendero chakaiswa mundangariro dzevakawanda:
-deb iri nani pane rpm.
-sei? Ndipe chikonzero
- nekuti vanozvitaura kunze uko, hama yangu yakandiudza uye ndakaiverenga online.
Ini ndaigona kunzwisisa kuti ivo vakakuudza idzi mhando dzezvitauro makore gumi kana gumi apfuura, nekuti apt-tora iguru sisitimu asi, sekutaura kwangu, kwemakore mashoma isu tanga tine zypper inoshanda senge chishamiso.
Ini pachangu, ini ndinowana YaST chakanakisa chinhu nezve openSuSE uye ini handina kumbobvira ndaziva kuti nei isina kutamirwa kune mamwe ma distros. Kuve neese marongero ehurongwa munzvimbo imwechete ndiko kwakanyanya kugadzikana kumushandisi.
Distro yandinoda asi iyo inogara ichizopedzisira yandinetsa ini handizive nei xS
Yakanaka dhizaini. Yakasimba kwazvo uye iri nyore kushandisa.
Kusangana zvakare neCinnamon